Dumarka Qatar oo qalinkooda kula dagaalamaya go’doominta - BBC News Somali
Image caption Sheekha Hinda waa haweenay 33 jir ah oo la dhalatay boqorka Qatar.
Inkastoo ay socdaan dadaalada dublamaasiyadeed ee lagu xalinayo khilaafka khaliijka, haddane dumarka dalka Qatar ayaa la sheegay in aqoontooda ay kula dagaalamayaan saamaynta ay yeelatay go'doominta lagu sameeyay dalkooda.
Tusaale ahaan, gabar ka mid ah qoyska boqortooyada Qatar oo lagu magacaabo Sheekha Hinda ayaa ku sugan magaalada London ee UK, halkaas oo ay ka jeedinayso khudbado la xiriira wanaagga dalkeeda, horumarka uu sameeyay, iyo waxyaabaha uu hiigsanayo, waxayna doonaysaa in ay meesha ka baxaan afkaaraha qaar ee laga qabo.
Fikradaha laga qabo waxaa ka mid ah arrimaha ku saabsan xuquuqaha dumarka, sidaas darteed markii la weeydiiyay aragtideeda ku aadan dumarka Sucuudiga ee loo fasaxay wadista gawaarida, hadalkaba dhexda umaysan dhigin, jawaabtan ayayna toos u abaartay.
"Waxaan leeyahay labo canug oo xanuunka neefta qaba, haddii saqdhexe lagu soo boodo oo aan u baahdo in aan isbitaal geeyo, ninkaygana safar shaqo ku maqanyahay, markaas waxaan ka hadlayno waa badbaado", ayay tiri iyada oo intaas ku dartay in ay soo dhaweynayso go'aanka dumarka Sucuudiga loogu fasaxay in ay baabuurta kaxeystaan.
Lahaanshaha sawirka ADRIAN HADDAD
Image caption Ardayda Qatar boqolkiiba 60% waa dumar
Markii go'doominta la saaray dalkeeda ka dib, waxa ay hormuud ka noqotay dadaallo lagu doonayo in adduunka intiisa kale lagu tuso wanaagga Qatar.
"Markii aan Maraykanka joogay waxaa la'igu oran jirey, 'waxaan u maleynaa in aad teendhooyin ku nooshihiin", ayay tiri Sheekh Hinda oo sheegtay in aragti qaldan laga qabo dunida Carabta.
"Waa laga yaabaa in aan xagga dhaqanka iyo hiddaha uga duwanahay dadka kale, balse ma jirto kala duwanaansho kale, dhammaanteen waxaan rabnaa muwaadiniin aqoon leh, iyo in qofkasta dalkiisa ka helo fursado" ayay tiri.
Image caption Qatar ayaa samaysay maalgashi xooggan oo xagga waxbarashada ah, 8 jaamacadood oo caalami ah iyo 2 maxali ah
Waxbarashada Qatar waxay tahay muhiimadda koowaad, waxayna dhisteen 8 jaamacadood oo caalami ah iyo labo maxali ah.
Sheekh Hinda waxay madax ka tahay Qatar Foundation oo ah hay'adda u xilsaaran maalgalinta waxbarasho, taas oo la asaasay 20 sano ka hor.
Waa arrin adag in la gaaro qorshaha fog Qatar oo ah in ay noqoto dal leh dad aqoontoodu sarayso, kuwaas oo diyaar u ah in ay wajahaan mustaqbalka marka ay dhammaadaan keydadka gaaska iyo shidaalka.
Balse waxbarashada waa mid horseedi karta in dadka is weeydiiyaan heerka dimoqoraadiyadda, markii arrintaas wax laga weeydiiyayna waxa ay tiri "Waan hubaa in doodahaas ay haddaba jiraan".
"Balse dimoqoraadiyada waxay tahay arrin dhinacyo badan loo fasiran karo oo micno badan leh," ayay sheegtay Sheekh Hinda.
Mar wax laga weeydiiyay waxbarashada dumarka ayay sheegtay in boqolkiiba 60% ardayda gudaha Qatar ay yihiin haween.
Image caption Qatar waxa ay doonaysaa in ay isku filnaansho gaarto marka kaydka shidaalka uu dhammaado
Waxayna qeyb ka tahay jiilka cusub ee qoyska boqortooyada Qatar oo doonaya in yool cusub ay ka gaaraan mustaqbalka.
Yoolka waxaa ka mid ah, in maalgelin badan lagu sameeyo dhanka waxbarashada, iyo siyaabo kala duwan lagu dhiirogaliyo dadka taajiriinta ah ee Qatar ee iyagu aanan soo arkin wax dhibaato nololeed.
Awoodda dadban ee Qatar ayaa ah mid aad u saraysa, marka laga tago in ay martigalinayaan koobka adduunka, hadana waxay hormuud ka tahay dalalka bixiya deeqaha waxbarasho.
Sheekh Hinda ayaa tiri "Islaamku ma qabo in aad sheegto haddii aad wax sadaqaysato" iyada oo ka hadlaysa mashaariicda badan ee daafaha adduunka ka fuliyaan.
Lahaanshaha sawirka EDUCATION ABOVE ALL
Image caption Qatar waxa ay bixisaa deeq waxbarasho, kuwani waa arday qaxooti ku ah Lubnaan